Umsebenzi kanye nezici zokugoqa insimbi yensimbi - Usizo lwabenza imisenenzi Ukwakha Metal Isitoreji Izinsiza kusebenza Metal Isitsha,Inqola,Pallet,Rack,Roll Isitsha Etc
Ikhaya » Umsebenzi kanye nezici zokugoqa insimbi yensimbi
1. Iyagoqeka insimbi yensimbi, ukwakheka kwesayensi nokubonakalayo, banciphise izindleko zokusebenza kwabasebenzi futhi bangezelele ukuphepha kokusebenza; isakhiwo esigoqekayo, izindleko eziphansi zokubuyisa ezingenamuntu;
2. Idizayini yokwakha ubunjiniyela be-pallet inengqondo, zonke izingxenye zikhiqizwa ngokuqondile isikhunta, imininingwane ihlanganisiwe, kanye nokubekezelelwa kwe-1mm kugcinwa; zonke izingxenye ezilimele kalula futhi ezingabizi zonke ziyatholakala noma kulula ukuzikhipha, okulula kakhulu ukuyigcina nokulungisa, olunwebisa kakhulu umzimba webhokisi. Impilo yenkonzo
3. Ugqoko wenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nokwenziwe ngobungcweti ngokuya ngamazinga wokuthumela waseYurophu. Ingaphakathi nangaphandle kwebhokisi liphathwa ngeplanethi yemvelo enobungane, ukufafaza nge-powder, ukufafaza ngopende kanye ne-electrophoresis yokwelashwa okungaphezulu. I-anti-rust, anti-ukushayisana kanye ne-anti-corrosion izakhiwo zinamandla kakhulu kunemikhiqizo yasekhaya efanayo, futhi ukushisa kuqinile , Amandla aphezulu, ukulayisha okukhulu, iqinile;
4. Ukusebenza, ukusebenza, Ukuvikelwa kwemvelo nokuphepha kwamakheji wensimbi anokugoqwa kudlulile ekuhlolweni okuqinile kwesayensi evela eceleni nokuqinisekiswa kwekhwalithi;
5. Lapho ilayishwa ngokuphelele izimpahla, ingafakwa emqubeni 6 izendlalelo zokuzuza isitoreji esenziwe ntathu;
6. Uhlobo lwesisekelo sethreyi, ngemfoloko, izinkomo zomhlaba, izinyusi, amakhreyithi, amashalofu, imigqa yomhlangano neminye imishini yokusebenza kahle;
7. Adopt amazinga wamazwe omhlaba, ingasetshenziswa ngokubambisana neziqukathi zokuthumela, thuthukisa ngempumelelo ukusetshenziswa kwendawo.
8. Ngokuya ngezidingo ezithile zamakhasimende, ukuguqulwa kwesakhiwo nezinye izinsimbi kungangezwa, njengezingxenye zepulasitiki (ukuvikela ukuklwebeka noma kuvezwa kwezinto zangaphakathi), amasondo ezansi (lula ukusebenza kwamanyuwali, ukusakazwa kwebanga elifushane), ukunciphisa isisindo sebhokisi (izindleko zokuthenga ezingaphansi)
Isikhathi sokuthumela: 2020-06-28